Igumbi elikhulu eliphindwe kabini eLaranjaLimao GuestHouse
Onke amagumbi ayehonjiswe ngononophelo kusetyenziswa ukwenza ngaphezulu kwefanitshala exutywe nezinto ezilula kakhulu kodwa ezisebenzayo. Onke amagumbi afakelwe igumbi lokuhlambela labucala, iifestile ezineembono zegadi, i-Wi-Fi yasimahla kunye neendawo eziluhlaza ezijikelezileyo zohambo olukhululekileyo, ukutya okuqhelekileyo, okanye imidlalo yangaphandle (i-volleyball net, intenetya yetafile, ibhola ekhatywayo, iibhayisekile). Iindwendwe zinokuphumla ngetanki entsha yokunkcenkceshela entsha ehlaziywayo eHlobo okanye kwiziko ngexesha lasebusika.
Amagumbi awanayo i-TV, kodwa kukho iWi-Fi enabela ngaphandle, kunye negumbi lokuhlala eliqhelekileyo (malunga ne-80m2) elinendawo yokudlala yabantwana. Sikwanayo nentente emalunga ne-100m2 enetrampoline kunye nentenetya yetafile. Ngaphandle sineekarati ezinyovwayo kunye neminye imisebenzi yemidlalo yangaphandle.
Ukongeza, sinendawo entsha eyi-2ha (ekufuphi neGuestHouse), iBarefoot Eco-Park (www.pedescalcoecoparque.pt) enemisebenzi emininzi eyongezelelweyo. Sinikezela ngezaphulelo ezikhethekileyo kwiindwendwe zethu ngexesha lokuvula i-eco-park.
Prepare-se para relaxar e disfrutar de coisas boas!
Onke amagumbi ayehonjiswe ngononophelo kusetyenziswa ukwenza ngaphezulu kwefanitshala exutywe nezinto ezilula kakhulu kodwa ezisebenzayo. Onke amagumbi afakelwe igumbi lokuhlambela labucala, iifestile ezineembono zegadi, i-Wi-Fi yasimahla kunye neendawo eziluhlaza ezijikelezileyo zohambo olukhululekileyo, ukutya okuqhelekileyo, okanye imidlalo yangaphandle (i-volleyball net, intenetya yetafile, ibhola ekhatywayo, iib…
A uma distância de 500m de supermercados, cafés e restaurants.
Estarei semper disponível e porto perto. Par além de viver no mesmo espaço, embora noutro edíficio, o meu trabalho também é perto (a cerca de 2km). Tenho uma empresa de eco-design, www.weproductise.com que desenvolve produtos com design prático e funcionais . Temos 2 marcas próprias, uma para iluminação decorativa, www.bomerango.co e outra para artigos ergonómicos e promotores de actividade física, www.bodymover.pt.
Estarei semper disponível e porto perto. Par além de viver no mesmo espaço, embora noutro edíficio, o meu trabalho também é perto (a cerca de 2km). Tenho uma empresa de eco-design,…